प्रधानमन्त्रीको 'धक्का' को आसय नबुझेर... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
प्रधानमन्त्रीको 'धक्का' को आसय नबुझेर संसदमा जंगिए देउवा
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, माघ १४
अग्निप्रसाद सापकोटालाई नयाँ सभामुख चुनेपछि मंगलबार संसद बैठक बस्यो।
सभामुख सापकोटाले संसद बैठक सुरू गरेलगत्तै बोल्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समय दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई बधाई तथा शुभकामना दिएर केही कुरा राखे।
सभामुख चयनमा केही ढिलाइ भएको बताएर उनले अरू विषयमा पछि आफ्ना कुरा संसदमा राख्ने बताए।
उनले विवादित एमसिसीबारे पनि छोटो कुरा राखे।
‘एमसिसीजस्ता कुरा पारित गर्नुछ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा सविस्तार पछि भन्नेछु।’
यति भनेपछि प्रधानमन्त्रीले विषय मोडे।
नयाँ वर्ष २०२० भ्रमण वर्षको रूपमा अघि सारेको प्रसंग निकाले।
भ्रमण वर्षको सुरूमै प्राकृतिक हिसाबले धक्काका संकेतहरू देखा परेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे।
‘भ्रमण वर्षको सुरूमै प्राकृतिक हिसाबले धक्काका संकेतहरू देखा परेको छ। जसलाई हामीले सावधानीपूर्वक सामना गर्नुपर्नेछ। सरकार त्यसको तयारीमा लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक धक्का के भनेर प्रस्ट रूपमा खुलाएनन्। उनले प्राकृतिक धक्का भन्नुको आसय अन्नपूर्ण वेसक्याम्पमा हिउँ पहिरोमा परेकाहरू हुनुपर्छ वा चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसतर्फ संकेत गरेको हुनसक्छ।
संसदको समय खेर जान नदिई काम अघि बढाइने उनले बताए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखको सफल नेतृत्व रहने विश्वास गर्दै शुभकामना दिएर आफ्ना कुरा सके।
त्यसपछि सभामुख बोले।
नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई तथा शुभकामना दिन दलीय आधारमा पहिले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोल्न समय दिए।
रोष्टममा उभिएर देउवाले कोटको खल्तीबाट कागज निकाले।
त्यहाँ केही लेखिएको थियो। अनि आफ्ना कुरा राखे।
‘धेरै ठूलो रस्साकस्सीका बाबजुद मुश्किल मुश्किलले ढिलै भए पनि सभामुख चयन हुनु भएकोमा सभामुखजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईंको कार्यकालका लागि पूरापूरा सहयोग हुनेछ, अहिले नै मेरो शुभकामना छ।’ त्यसपछि उनले पार्टीले सभामुखमा किन उम्मेदवारी दिएन प्रष्टाए।
संसद विपक्षीको हो भन्ने मान्यता रहेको र तटस्थ तथा निष्पक्ष पद भएकोले उम्मेदवारी नदिएको उनको भनाइ थियो।
त्यसपछि उनले सरकारको आलोचना सुरू गरे।
मानव अधिकार, प्रेसलगायत एकपछि अर्को विधेयकहरू नागरिक हितविपरीत हुने गरी सरकारले ल्याएको आरोप देउवाले लगाए।
‘प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको कुरो गर्नुभयो। कति राम्रो! बडा खुसी लाग्यो,’ उनले भने, ‘तर लोकतन्त्रको खिलापका विधेयकहरू त हटाउनुपर्‍यो।’
उनले विपक्षी दललाई विश्वासमा लिन पनि सुझाव दिए।
त्यसपछि देउवा संसदमा कड्किए।
‘प्रधानमन्त्रीले धक्काको कुरा गर्नुभएको छ, धक्का। के धक्का हो यो?,’ प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा नबुझी देउवाले आफ्ना कुरा राखे, ‘कहाँबाट आयो धक्का भन्ने शब्द, नयाँ सुनें मैले आज। ठूलो धक्का आउँछ रे नेपालमा, कसले दिने भएको छ धक्का हामी पनि थाहा पाउनुपर्‍यो। नेपालमा धक्का दिने को? छ थाहा पाउनुपर्‍यो हामी सहयोग गर्न तयार छौं। कसले धक्का दिन सक्छ हामी पनि हेरौं। धक्का कसले दिँदैछ प्रधानमन्त्री बोल्नुभएको छैन।’
आफ्ना सभापतिले बोलेको कुरा धत लागेर कांग्रेस सांसदले टेबुल ठोके। आफूले बोलेको प्रसंगमाथि देउवाले आलोचनात्मक कमेन्ट गरेपछि प्रधानमन्त्री चनाखो भएर सुनिरहेका थिए।
प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न आग्रह गर्दै सभामुखलाई पुन: बधाई दिएर देउवा आफ्नो सिटतर्फ गए।
सभामुखले यसबीचमा बोल्न राजपाका महेन्द्रराय यादवलाई समय दिए।
देउवा सिटतर्फ लम्कदै थिए। बाटोमा यादव भेटिए पनि हाइ हेल्लो गरेनन्।
सिधैं आफ्नो सिटमा गएर बसे।
त्यसपछि छेवैमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग केही कुरा गरे।
सांसदहरू हाँसे। प्रधानमन्त्री उठेर बाहिर निस्किए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६, १६:५६:००
‘मेराबारे लेखेका कुराले आमालाई हर्ट गर्दो रैछ’
मलगायत प्रधानमन्त्री बनेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौं: बाबुराम भट्टराई
१० वर्षे काव्यलाई किताबभन्दा 'स्क्रिप्ट' प्यारो
बाँस्कोटाको अडिओबारे सदनमा जानकारी गराउन कांग्रेसको माग
बाँस्कोटामाथि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेकै होला : प्रवक्ता श्रेष्ठ
‘मेराबारे लेखेका कुराले आमालाई हर्ट गर्दो रैछ’ कोमल वली